PressReader - Ilanga: 2018-10-29 - Ithemba ngokusimama komnotho kuleli
Ithemba ngokusimama komnotho kuleli
Ilanga - 2018-10-29 - Bono - BONGINKOSI ZONDI
INKULUMO kaMengameli Cyril Ramaphosa ayethule ngesikhathi kuvulwa ingqungquthela yokutshala imali eNingizimu Afrika ebiseSandton, eGauteng kusukela ngoLwesihlanu kwaze kwaba yizolo ngeSonto, ibe yilokho cishe iningi ebelikulindele.
Lapha sisho ukuthi umengameli ukwazile ukunikeza ithemba nesiqiniseko kubatshalimali ukuthi iNingizimu Afrika inamathuba amahle okuba bahlomule nokuthi imali yabo iphephile ngoba isikhathi sokungabaza nokungabi nasiqiniseko ebesikhona kuleli shumi leminyaka esiphuma kulona, sesidlulile.
Isithombe esidwetshwe nguMnu Ramaphosa kosozimali sibo- nakala singesamukelekile, futhi likhona ithemba ngempumelelo yomkhankaso azibekele wona wokuba atholele leli zwe isamba esiwu-$100 billion (R1,46 trillion) kubatshalimali bakuleli nabasemazweni angaphandle kule minyaka ewu-5 kusukela manje.
Lokhu kufakazelwa wukuthi okwamanje iwu-R35 billion imali ayethenjiswe yiChina, yiSaudi Arabia ne-UAE ngokwahlukana.
UMnu Ramaphosa wenze ukuvuselela umnotho kwaba yiwona mgomo ohamba phambili njengoba engene esikhundleni sokuhola leli zwe ngoNhlolanja (February) nonyaka emuva komonakalo owenzeke eshumini leminyaka esiphuma kulona.
Lokhu kulandela ingqungquthela yokudala amathuba emisebenzi ebisekuqaleni kwalo nyaka, lapho ememezele izivumelwano zokusebenzisana phakathi kukahulumeni namabhizinisi amakhulu athe zingase zidale amathuba emisebenzi awu-275 000 ngonyaka. Ramaphosa. Uthe okokuqala yikhona ukuthi ukwazile ukuthumela umyalezo wethemba kubatshalimali. Ubalule nokuthi kuyaziwa ukuthi inkohlakalo iyabaxosha abatshalimali, ikakhulukazi abakwamanye amazwe, ngakho imizamo umengameli aseyiqalile yokulwa nenkohlakalo ibalulekile njengoba kungakapholi maseko engenile esikhundleni usenze izinguquko ezibonakalayo ikakhulukazi ebuholini bamabhodi alawula izinkampani zikahulumeni.
Okunye akuphawulile athe leli zwe libe nenhlanhla ngakho, wukuthi isithombe sikaMengameli Ramaphosa kubatshalimali samukelekile njengoba lokhu kufakazelwa wukwenanela kosomabhizinisi baseNingizimu Afrika kwinhlabamkhosi yakhe yokuba batshale imali yabo emnothweni waleli zwe njengoba kule ngqungquthela izinkampani zasekhaya zizibophezele ekutshaleni isamba semali esisondele ku-R290 billion.
Wengeze ngokuthi lokhu kuwuphawu oluhle ngoba kwandisa imali yentela uhulumeni ozokwazi ukuyiqoqa ukuze ufeze izidingo zabantu.
Kunjalo nje, ngalokhu amabhizinisi akuleli akhombisa awakwamanye amazwe indlela kwazise wona abengakasabeli kule nhlabamkhosi. ntshekile ngasemalini - osekulibeke phansi kwefu lenzikamnotho - phakathi kwayo kubalwa lokhu okulandelayo:
- Uhulumeni usuqalile ukubhekana nenkinga yokungabi nasiqiniseko ngenqubomgomo kanjalo nokugudluza izithiyo ebezikhona kwabezimboni abebefisa ukutshala imali;
- Wukusebenzisana neWorld Bank ukwenza ngcono isimo sokuqhuba amabhizinisi kanjalo nokusungula amaqhinga amasha okutshala imali eNingizimu Afrika;
- Ukusungula isikhwama esiqondene nengqalasizinda ( Infrastructure Fund) kwazise ukuthuthukiswa kwayo kunegalelo ekukhuliseni umnotho nokudala amathuba emisebenzi.
ISITHOMBE NGABE: GCIS
UMnu Cyril Ramaphosa ethula inkulumo engqungqutheleni yokuheha abatshalimali kuleli.